🥇 ▷ Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato kahor intaanad soo dejisan NecroBot ✅
Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato kahor intaanad soo dejisan NecroBot
Xaddiga maqaallada lagu sameeyay Pokémon Go waa mid aad u ballaaran, ka dib oo dhan shaki la’aan waa mid ka mid ah cayaaraha ugu wanaagsan ee loo yaqaan ‘Smartphones’ sannadihii la soo dhaafay. Sababtaas awgeed waxaan rabnay inaan kuu sheegno mid ka mid ah Botska ugu dhameystiran ee loo sameeyay dalabka, kaas oo aad ku fududayn karto kuna hagaajin karto horumarkaaga iyo horumarkaaga ciyaarta. Micnahaasna waxaad ku baran kartaa sida loo sameeyo soo dejiso NecroBot.
Bot Bot waa barnaamij kombuyuutar oo mas’uul ka ah inuu si otomaatig ah u qabto howsha taxanaha ah. Arrinta Pokémon Go, Bot wuxuu abuuray waa NecroBot. Barnaamijkan ayaa mas’uul ka ah sidii uu u ekaysiinayo dhaqanka aadanaha, si uu u siiyo aragti ah in uu yahay qof xakameynaya ciyaarta.
Faa’iidooyinka iyo faa’iido darrooyinka NecroBot
NecroBot waxay bixisaa faa iidada kor loogu qaadayo wax qabadkeena iyo horumarka ciyaarta, sababta oo ah ciyaarta annaga ayaa u dhaqaaqna, marka run ahaantii aan ahayn. Dhanka kale bot wuxuu lahaa dib u eegis togan maxaa yeelay ma uusan soo sheegin wax mamnuuc ah.
Dareenkaas, dhibaatada kaliya ee cad ee ciyaarta waa suurtagalnimada yar ee la mamnuuco. Sababta oo ah haddii taasi annaga nagu dhacdo waxaan halis ugu jirnaa inaan lumino horumarkheena. Laakiin xaqiiqdii waxaad la yaabi doontaa waa maxay Shaydaan? Waxay tixraacaysaa xayiraad lagu dabaqay isticmaalaha qaarkood, inay ku xad gudbeen siyaasadaha ciyaarta. Sababtaas awgeed waa inaad aad uga taxaddartaa.
Maxaan sameeyaa si aan u soo dejiyo NecroBot?
Bakteeriyadaan lagama heli karo dukaanka Google Play, sidaa darteed faylka loo adeegsado ee faylka lagu fulin karo waa in la soo degsadaa. Si aad u soo dejiso oo aad u maamusho faylkaan, waa inaad awoodsiisaa ikhtiyaarka “ilo aan la garanaynin” oo ku yaal qaybta amniga ee aaladda aaladda. Marka la rakibo, waxaan ku raaxeysan karnaa dhammaan faa’iidooyinka NecroBot ee Pokémon Go.